Isitudiyo eHaslihuus - sincinci, silungile kwaye simnandi
I-Haslihuus ibekwe kwindawo yeholide yaseHalti kwiHasliberg entle enombono omangalisayo kumazantsi eentaba. Iparadesi ejikelezayo unyaka wonke, ekwakumema ukuba uye kwi-skiing ebusika. Ithambeka limalunga nama-200m kuphela.
Kufuphi kukho ichibi lokuqubha, ehlotyeni lilinda abancinci nabakhulileyo ukuba baphole emva kosuku ezintabeni.
Isitudiyo esipholileyo esikufutshane nethambeka lokutyibilika sikuvumela ukuba wonwabele iholide yakho.
Usuku luqala ngombono omangalisayo weentaba, kunye nomoya omtsha weentaba, kunye namathuba amaninzi okunyuka kunye nokufumanisa. Kukho iindawo zokutyela ezininzi ezipholileyo kufutshane, kodwa nevenkile ekufuphi yaseStein yasefama kunye nevenkile yelali ibonelela ngezinto ezityiwayo ezinokulungiswa ekhitshini elincinci kwaye lonwabele ngaphakathi okanye elangeni.
Ilungele iintsuku ezimbalwa ezipholileyo ezimbini.
I-sauna encinci ingasetyenziselwa ngokuhlelwa.
Kwindawo ethe cwaka yekhaya leeholide, phakathi komoya omhle weentaba kwaye usondele kwezolimo. Kukho iitoni zamathuba okuzonwabisa kufutshane, kunye neMeiringen (ngaphantsi nje kwemizuzu engama-20) okanye i-Interlaken (imizuzu engama-30). Intlambo yokubaleka (i-ski slope) imalunga nama-200m kude. Ukuba kukho ikhephu elaneleyo, unokutyibiliza uye kumnyango wangaphambili.
Mna ngokwam andiyi kuhlala ndikhona. Kodwa ndingafumaneka ukuba unayo nayiphi na imibuzo.
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Hasliberg